Duqa Muqdisho iyo Wasiirka shaqada oo kala saxiixday mashruuc lagu caawinayo dadka danta yer ee ku nool caasimadda. | XAL DOON
Home NEWS Duqa Muqdisho iyo Wasiirka shaqada oo kala saxiixday mashruuc lagu caawinayo dadka...
Duqa Muqdisho iyo Wasiirka shaqada oo kala saxiixday mashruuc lagu caawinayo dadka danta yer ee ku nool caasimadda.
Guddoomiyaha Gobalka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho, Mudane Cumar Maxamuud Maxamed (Cumar Filish) iyo wasiirka shaqada iyo arrimaha Bulshada ayaa maanta Muqdisho ku kala saxiixday mashruuc lagu caawinayo dadka danta yer ee ku nool caasimadda.
Mid kamid ah Wasiirada maamulka Puntland oo Muqdisho ugu geeriyooday Covid19.
Ciidamada amaanka oo dhimasho iyo dhaawac u geystay askar Shacab dhac ugu geysaneysay Muqdisho.
Guddiga joogtada ee golaha shacabka oo maanta kulan aan caadi eheyn la wada sugayo yeelanaya.